आफ्नै अनुसन्धान, आफ्नै प्याटेन्ट राइट, आफ्नै उत्पादन, आफ्नै प्रभाव । सफ्टवेयर र हार्डवेयरमा हुवावेको यो चक्रीय शैली यसरी नै जाने हो भने दूरसञ्चार क्षेत्रमा सायदै कुनै कम्पनीले टाउको उठाउने ठाउँ पाउलान् । कुनै कम्पनीले धेरै सफलता हासिल गर्दा उसलाई रोक्ने कुनै उपाय बाँकी रहन्न् ?हुवावेका लागि आफ्नै सफलता घातक भयो ? यो अनुमान मात्रै हो ।कि हुवावेले अमेरिकाले भनेजस्तै अरूको तथ्यांक चोरेर आफ्नो सरकारलाई बुझायो ? यो पनि अरोप मात्रै हो किनकि अमेरिकाले अहिलेसम्म हुवावेले तथ्यांक चोरेको र आफ्नो सरकारलाई दिएको पुष्टि गर्न सकेको छैन् । धेरै अमेरिकी अधिकारीहरूले हुवावेले अरू देशको दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसै मार्फत तथ्यांक चोरी गरी आफ्नो देशमा लैजाने गरेको आरोप लगाउन थालेको पनि करिब चार वर्ष भइसक्यो । तर, खै त प्रमाण ? हुवावेका अधिकारी र कम्पनीले जारी गर्ने विज्ञप्तिमा पनि प्रायः यही आशयको प्रश्न सोधिन्छ । प्रमाण पनि सार्वजनिक गरेको भए सायदै अमेरिकामाथि कसैले प्रश्न गर्ने थियो न त हुवावेले यसरी प्रत्युत्तर फर्काउने मौका पाउने थियो ।
फाइभजी प्रविधिमा हुवावेले हात पारेको यो सफलतालाई ईर्ष्या नगर्ने कम्पनी सायदै छन् । ईर्ष्या नहोस् पनि किन विश्वका धेरै देश र त्यहाँका उपभोक्ता फाइभजी कस्तो होला भनेर अनुभव गर्न आतुर छन्, धेरै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक सबैभन्दा पहिला आफ्ना उपभोक्तालाई यो प्रविधिबाट सेवा दिन आतुर छन् । हुवावेको दाबीलाई मान्ने हो भने फाइभजी नेटवर्क जडान गर्न ऊ तयार छ तर कतिपय कम्पनीले भने नेटवर्क त परै जाओस् यसलाई सपोर्ट गर्ने स्मार्टफोन पनि थोरैले मात्र बनाउन सकेका छन् ।हुवावेले पछिल्लो पटक प्रकाशित गरेको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ३० सहरमा फाइभजी विस्तारका लागि उसले ठेक्का पाएको छ ।